မေသူဇင် – Hlataw.com
ကျတော် ၁၀ တန်းအောင်၊ ကောလိပ်တစ်ခုမှာ ကျောင်း လာတက်ရတယ်။နယ်ကဆိုတော့ အဆောင်ငှါးနေရတာပေါ့။ငွေကြေးမတက်နိုင်တော့ ကျူရှင်မယူနိူင်ဘူးလေ။ပထမနှစ်ကတော့ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အောင်မြင်တယ်။ဒုတိယနှစ်ကျတော့ မရတော့ဘူး။ကျောင်းမှာလည်း စာတွေသေချာ သင်သလို စာမေးတာတွေလည်း လုပ်လာတယ်။ကျတော်က စာမရတာများတယ်။မေးတိုင်းမရတော့ တနေ့မှာ အင်္ဂလိပ်စာပြတဲ့ ဆရာမက နှစ်ပြားမတန်အောင် ဆူပါလေရော။မျက်နှာတောင်မဖော်ရဲဘူး။ပြောလိုက်တာဗျာ ကျောင်းဆင်းတော့ ဆရာမကိုတွေ့တာနဲ့..။“ဆရာမ..စကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါ”“အေး..ပြောလေ”“ကျတော်နယ်ကလာပြီးကျောင်းတက်တာပါ ကျတော်တို့ဘဝက.. မပြည့်စုံပါဘူး.. ကျူရှင်လည်း မတက်နိုင်ပါဘူး..ဆရာမ”မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောနေတော့ ဆရာမ ဂရုဏာသက်သွားတယ်နဲ့ တူပါတယ်။“အေးလေ..ဆရာမကလည်းနေ့လည်က..အခြား ကိစ္စနဲ့ရောသွားတော့.. ဒေါသပိုဖြစ်သွားတယ် မင်းမင်း…”“ဟုတ်..ဟုတ်..ဆရာမ“ပိတ်ရက်တွေမှာ..အိမ်လာခဲ့လေ. . ဆရာမဘာသာအပြင်.. အခြားဘာသာပါ သင်ပေးမယ်…”“ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဆရာမ” ဆရာမလည်း ဆိုင်ကယ်ပေါ်ခွ ဆိုင်ကယ် ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး မောင်းထွက်သွားသွားပါတော့တယ်။ဆရာမနာမည်က ဒေါ်မေသူဇင်ပါ။အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပါတယ်။အသင်ပြလည်း ကောင်းသူတယောက်ပါ။ဆရာမက တရုတ် လူမျိုးစပ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။အသားက ဖြူတယ်။တရုတ်မျက်နှာပေါက် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ဝတ်ဆင် နေထိုင်တက်သူဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်တော့ ဆရာမအိမ် ထွက်လာခဲ့တယ်။အိမ်ရောက်တော့ ဆရာမအိမ်ရှေ့မှာ ပန်းအိုးတွေ ရွေ့နေတယ်။လွယ်အိတ်ကို ဒန်းပေါ်မှာတင်ပြီး ဆရာမကို ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတုန်း…“ဇင်ဇင်..သူကဘယ်သူတုန်း…”“အိမ်မှာ..စာလာသင်တာ..မင်းမင်းတဲ့.. နောက်မှ.. အမေ့ကိုပြောပြမယ်..”
“မင်းမင်း..အဲဒါအမေလေ”“ဟုတ်..အန်တီနေကောင်းလား..”“ကောင်းပါတယ်ကွယ်… သားလည်း စာကြိုးစားနော်” ဆိုပြီး အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ဆရာမအမေက သဘောကောင်းမယ့်ပုံရှိတယ်။မျက်နှာကပြုံးလို့ ဆရာမနဲ့ ပန်းအိုးတွေ အတူရွေ့တော့မှ အနီးကပ် မြင်ဖူးတယ်။ဆရာမက အရပ်တော့မရှည်ဘူး။အသားတော့ တော်တော်ဖြူတယ်။အိမ်နေ အဝတ်အစားနဲ့ဆိုတော့ သဘာဝအတိုင်း လှပနေတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း ပြည့်တယ်လို့ ပြောရမယ်။အပိုအလိုမရှိ ဆူဖြိုးနေတယ်။အားလုံးပြီးသွားတော့ ခြေထောက်လက်ထောက်ဆေးရန် နောက်ဖေး ဦးဆောင်ခေါ်သွားတယ်။ဆရာမက လှမ်းလျှောက်တိုင်းတုန်ခါနေတဲ့ တင်ပါးကြီးကို ကြည့်လိုက်လာခဲ့တယ်။စာသင်တော့လည်း ကြမ်းပြင်မှာပဲ သင်တော့ ဟိုက်နေတဲ့ လည်ပင်းမှ နို့တွေတွေ့နေရတယ်။မနေနိုင်တော့ဘူး ဆရာမကို ခွင့်တောင်ပြီး အိမ်သာထဲဝင်၊ ဆရာမမှန်းပြီး ဂွင်းထုပလိုက်တယ်။ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းသွားတော့ ဆရာမအပြင် မိသားစုနဲ့ပါ ခင်မင်ရင်းနှီးသွားတယ်။စာမေးပွဲဖြေဖို့ ကျောင်းပိတ်ရက်ပေးတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆရာမအိမ်မှ ဆရာမမှလွဲ၍ တစ်အိမ်သားလုံး ဘုရားဖူး ထွက်ကြတယ်။ဆရာမက ကျောင်းမှာဆို သူနဲ့မသိသလိုပဲ။ကျတော့ကိုဆက်ဆံတာ မာတင်းနေတာပဲ။အဲလိုအချိန်တွေဆို ဆရာမကို မကျေနပ်ဖူး။အိမ်မှာကျတော့လည်း ဖင်ပုတ် ခေါင်းပုတ်နဲ့ ”တွေ့မယ” ဆိုပြီး ညိုးထားလိုက်တယ်။ဒီတပတ်တော့ ဆရာမအိမ်မှာ ကျတော့နဲ့ နှစ်ယောက်တည်းရှိမှာကို တွေးပြီး ရန်ခုန်နေတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဆရာမကိုခိုးကြည့်ရင် ယခင်က အိမ်ကလူတွေ သိမှာစိုးလို့ သေချာမကြည့်ရဲဘူး။ဒီတခါတော့ ပတ်ဝန်းကျင်လွတ်ကြည့်ရတော့မယ် ဟဲဟဲ။ပိတ်ရက်ရောက်တော့ အိမ်ကနေ အစောကြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ဆရာမအိမ်ရောက်တော့.. “ဆရာမ..ဆရာမ” အသံလည်းမကြားဘူး။အဲဒါနဲ့ အိမ်ထဲဝင် ကြည့်တော့လည်း မတွေ့ဘူး။ဆရာမအခန်းကို ကြည့်တော့ အားပါးပါး ဆရာမအိပ်နေတာ ဖင်ကိုပြောင်နေတာပဲ။
အတွင်းခံလည်း ဝတ်မထားဘူး။တစောင်းအိပ်နေတာများ နောက်က ကြည့်ရတာ ဂစ်တာတလက် ဒေါင်လိုက် ချထားသလိုပဲ။ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျတော့ငပဲက ပြထောင်တက်လာပြီ။ဆရာမက ပုလို့လား မသိဘူး။တင်တော်တော်ကြီးတယ်။နောက်ပြီး ဖွေးဥနေတာပဲ။ပေါင်တန်က အရင်းဘက်က တုတ်ပြီး အောက်ဘက်ကို သွယ်ဆင်းသွားတယ်။ကျတော့လီးကလည်း မရတော့ဘူး။ပုဆိုးလှန်ပြီး ဂွင်းထုနေတာ သိပ်မကြာပါဘူး ထုလို့ပြီးသွားတယ်။ကျတော်လည်း လီးရည်တွေကို ပုဆိုးနဲ့သုပ် အပြင်ပြန်ထွက်ပြီး…။“ဆရာမ..ဆရာမ” မကြားကြားအောင် ခေါ်လိုက်တော့..“လာလေမင်းမင်း..ဆရာမလည်း မင်းမင်းခေါ်မှ နိုးတော့တယ်”ကျတော်လည်း ခုမှရောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဆရာမပုံက ခုမှအိပ်ယာထတာဆိုတော့ ဆံပင်ဘိုသီဖက်သီနဲ့ မျက်နှာလေးကတော့ အိပ်ရေးပျက်တာသာ ပြောတာ ဖောင်းနေတာပဲ။ဘော်လီလည်း ဝတ်မထားဘူးနဲ့တူပါရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ရုန်းထွက်နေသယောင်။ဆရာမကို သေချာစဆုးံကြည့်ပြီးမှ…။“အားနာလိုက်တာ..ဆရာမရယ်. ကျတော့ကြောင့်.. အိပ်ရေးပျက်ပြီ”“ညကတော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ဘူး..”“ဧကန်န..ဆရာမညက..ချစ်သူနဲ့ဖုန်းပြောတာ ဖြစ်မယ်.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်..”“မင်းမင်းကတော့..စွတ်အထင်ကြီးနေတယ်.. ချစ်သူလား.. မူးရင်တောင်..ရှူစရာမရှိဘူး.”“ကျတော့.ဆရာမဒီလောက်လှနေတာ.. အကြွင့်မဲ့တော့.. မယုံပါဘူး..”“ကိုယ်တော်..မယုံလည်းနေ.. မျက်နှာသစ်လိုက်ဦးမယ် .. ခဏစောင့်” ဆိုပြီး ရေချိုးခန်းထွက်သွားပါတော့တယ်။ဆရာမက ကျတော့ကို စာသင်လိုက်၊ စက်ချုပ်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေ များနေတယ်။စာသင်ထွက်သွားတော့လဲ လှုပ်လိုက်တဲ့ဖင် စက်ချုပ်ခုံမှာ ကျောပေးထိုင်ပြန်တော့လည်း ဖင်က ခုံအပြည့်နေရာယူထားတယ်။ကျတော် ဆရာမကိုကြည့်ပြီး အမျိုးမျိုးပြစ်မှား နေတယ်။“မင်းမင်း..ခဏ” “စက်ခုံက..နင်းရတာ..ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး.. အရမ်းလေးနေတယ်”“နတ်တွေကျပ်နေလို့နေမှာပေါ့.. ဆီထိုးလား”“မထိုးတာကြာပြီ”
ကျတော်လည်း ပုဆိုးကိုတိုတိုဝတ်၊ ဆရာမရှေ့မှာ ထိုင်၊ ဆီထိုးပေးနေတယ်ပြီးတော့ ဆရာမကိုကြည့်ပြီး တောင်နေတဲ့ လီးကိုလည်း အောက်စ နည်းနည်းလွတ်ပြီး ပြပေးနေတယ်။ဆရာမက ဆီထိုးတာ မကြည့်ပဲ လီးကိုသာ အာရုံစိုက်နေတယ်။အာရုံစိုက်လေ ပိုပြီးပြပေးတော့ ဆရာမ မနေနိုင်တော့ဘူးလားမသိ။အိမ်သာဘက် ခဏခဏထွက်သွားတယ်။မိုးနည်းနည်းချုပ်လာတော့..၊“မင်းမင်း..အိမ်မှာအိပ်သွားပါလား”“ဆရာမနဲ့ကျတော်နှစ်ယောက်တည်း တော်ကြာ.. ဆရာမကို..ပြောကြဦးမယ်”“မင်းမင်းရယ်..ဆရာမအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့”“အိုကေလေ..အိပ်မယ်” ဆရာမနဲ့ကျတော်စကားပြောလိုက်၊ စာသင်လိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ခဏနေတော့ အခန်းထဲသွားပြီး ထမီရေရှားကြီးနဲ့ ထွက်လာတယ်။“အိုက်တယ်ကွယ်..ရေချိုးဦးမယ်..”“ဆရာမကလည်း..မိုးချုပ်မှ.. အအေးပက်နေပါဦးမယ် ..”“ရပါတယ်..ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..” ဆရာမက ပြောလည်းပြော၊ အလုပ်ကလည်း လုပ်နေသေးတယ်။
ရေရှားနဲ့ဆိုတော့ ဖင်ကြီးတွေ တုန်ခါနေတာပဲ။အနားရောက်လို့ ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ရင်သားကြီးတွေက ဝင်းဝါမို့မောက်နေတာပဲ။ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်နေပြီ။“ဆရာမ..ကျတော်လည်း..ဆရာမနဲ့အတူ ရေချိုးမယ်..” “ချိုးလေ..”. ဆရာမလည်း ရေချိုးခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ရေပန်းအောက်ဝင်ပြီး ရေပန်းဖွင့်ချလိုက်တယ်။ကျတော်က ဆရာမနောက်မှဆိုတော့ ရေစိုထမီနဲ့ လှနေတဲ့ ဆရာမဖင်ကိုမြင်ပြီး စိတ်က ထိမ်းမရတော့ဘူး။ဆရာမနောက်မှာ ကပ်လိုက်တယ်။လီးက ဆရာမတင်ပါးကို ထောက်လိုက်တယ်။ပထမတော့ တွန့်သွားသေးတယ်။ဘာမှ မပြောတာနဲ့ ဆရာမကို နောက်ကနေသိုင်းဖတ်လိုက်တယ်။“အို့..မင်းမင်း”“မနေနိုင်တော့ဘူး..ဆရာမရယ်..”“မင်းမင်း..ဆရာမကို အထင်သေးတာလား”“မဟုတ်ရပါဘူး..ဆရာမရယ်” စကားလည်းပြော ဂုတ်သားလေးကိုလည်း နမ်း၊ နို့တွေလည်း ကိုင်၊ ဖင်ပါးကြီးကိုလည်း လီးနဲ့ နေရာအနှံ့ လိုက်ထိုးပေးနေတယ်။ဘာမှ မပြောတော့ ရေရှားထမီးကို ချွတ်ချလိုက်လိုက်တယ်။ဖြူဖွေးနေတာပဲ၊ အသားက တခါမှတောင် မတွေ့ဖူးဘူး။ဥနေတာပဲ။ဆရာမကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေ စုပ်လိုက်တယ်။နို့တွေလည်း နယ်ပေးနေတယ်။ဆရာမပျော့နေပြီး လက်က တဖြည်းဖြည်း အောက်ကိုလျော စောက်ဖုတ်ဆီ သွားနေတယ်။
စောက်ဖုတ်ကြီးက အရည်တွေရွှဲနေပြီ။လက်ချောင်းတွေက စောက်စေ့နေရာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။“အို..အို..ဟာ…ဟာ..ဟင်း..အင်း… အမလေး.. ဟင်း… ဟင်း..ကျွတ်..” ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဆရာမစောက်ပတ်ကို နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက်က ဖြဲလိုက်ပြီး လျှာ်နဲ့. ယက်တင်ပေးလိုက်တယ်။ဆရာမ ထွန့်ထွန့်လူးနေပြီ။နံရံမှာ ဆရာမကိုကပ်စေပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ကကိုင်ပြီး မတင်လိုက်တယ်။“မင်းမင်းရယ်..ဘယ်လိုလုပ်မလို့လဲ..”ဘာမှပြန်မပြောပဲ ပြဲအာသွားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို အပြီအပြင်ယက်ပေး၊ စောက်ခေါင်းထဲ လျှာထိုးထည့်ပေး၊ စောက်စိကို သကြားလုံးစုပ်သလိုမျိုး…၊“ပြွတ်..ပြွတ်..ရှလွတ်..ရှလူး..ပြွတ်..”“အိုး..အိုး..အား..အား..အား.. အမလေး..အင်း.. အင်း..ဟင်း”“မင်းမင်း..မရတော့ဘူး…အား..အား.. အို.. ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေတာလဲ..ဟင်း. အမလေး.. လေး.အား..အား… ထွက်ပြီ..ထွက်ကုန်ပြီ… အား…အား.”ဆရာမစောက်ရည်တွေ..ကျတော့မျက်နှာပေါ် ပန်းချလိုက်တယ်။ကျတော်လည်း ထွက်ကျလာတဲ့ စောက်ရည်နဲ့ ပေနေတဲ့ စောက်ရောတွေပါ ယက်ပေးလိုက်တယ်။“မင်းမင်းရယ်.. အားနာလိုက်တာ.. ဆရာမ.. ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး…” “လိုးပေးရမလား..ဆရာမ” “အင်း” ကျတော်လည်းပုဆိုးကိုနဲ့အကျီပါ င်္ချွတ်လိုက်ပါသည်။ချွတ်နေတုန်းလီးက ခါးယမ်းနေတော့ ဆရာမကြည့်ပြီး အသည်းတွေ ယားနေလားမသိ ထိုင်ချလိုက်ပြီးကျတော့လီးကို သူ့လက်ဖြူဖြူလေးနဲ့ အသာအယာဆွဲယူကာ ပါးစပ်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။ကျတော်လည်း ဆရာမခေါင်းကိုကိုင်ပြီး လီးကိုရှေ့တိုးပေးလိုက်တယ်။
ဆရာမက အကြုံမရှိပေမယ့် စုပ်ပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖုံးလွမ်းနေလို့လားမသိ ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေသော လီးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိုးကာ ဒစ်တဝိုက်ကိုယက်ပေးနေတယ်။“ဟ…အား..ကောင်းလိုက်တာ.ဆရာမရယ် ” ဆရာမ ကျတော်ပြောတာကြားလိုက်တော့ မော့ကြည့်ပြီး လီးကို အစွမ်းကုန်ငုံစုပ်ကာ အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေပါသည်။ဆရာမ လီးစုပ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျတော့ဂွေးစိကြီးတွေပါ အတွဲလိုက် ရှုံ့တက်သွားပါသည်။လီးမွှေးတွေကလည်း ဆရာမ မျက်နှာကို ထိနေတော့ ကြက်သီးတွေ ပိုထလာလားမသိဘူး အားရပါးရကို စုပ်ပေးနေပါတယ်။“အား..အား..ဆရာမ..ဆရာမ.. တော်..တော်ပြီ.. ထွက်ကုန်တော့မယ်..”ဆရာမခေါင်းကိုဖယ်သော်လည်း ဖယ်မပေးတဲ့အပြင် အားပြင်းပြင်းနဲ့စုပ်ပြီး လီးတဝက်လောက်မှာ ဆရာမသွားနဲ့ဖိထကာ လီးထိပ်ကအပေါက်လေးကို လျှာထိပ်နဲ့ ထိုးထိုးပေးနေပါသည်။“အိ..အား..ဆရာမ..ကျွတ်..အာ.း.. ထွက်ပြီ..အ… အ.. အား..” ကျတော့သုတ်ရည်တွေ ပြစ်ကနဲ ပြစ်ကနဲ့ ဆရာမပါးစပ်ထဲ ပန်းဝင်ကုန်ပါသည်။ပါးစပ်ထဲက သုတ်ရည်တွေ ထွေးမထုတ်ပဲ မြိုချလိုက်ပါသည်။“”ဆရာမရယ်..” ဆိုပြီး မထူကာ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်ပါသည်။နီရဲနေသော နို့သီးခေါင်းကို လက်ညိုးလက်မနဲ့ ပွတ်ချေပေးပြီး နို့သီးလေးတွေထောင်လာတော့မှ ဆရာမစောက်ဖုတ်ကို လက်ဝါးနဲ့အုပ်ကာ ပွတ်ပွတ်ပေးလိုက်ပါသည်။
“မင်းမင်း..လိုးပေးတော့လေ.. အရမ်းခံချင်နေပြီကွယ်..”“နံရံကို လက်ထောက်.ဖင်ကိုကော့ထား..ုဖြန်း.. ဖြန်း.. ဖင်ကိုကော့လေ..”“ကော့..ကော့နေပါတယ်.. မင်းမင်းရယ်…”“တင်နှစ်ခုကိုကိုင်..ဖြဲထားပေး..”“ဖြန်း..ဖြန်း..ဖြန်း…လုပ်လေ”“ဟုတ်..ဟုတ်…လုပ်ပါ့မယ်… မရိုက်ပါနဲ့…” ကုန်းပြီးဖြဲထားတော့..ပြဲအာနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်တယ်။“အား..အား…အင်း..အိုး..” ယက်လည်းယက် တင်ပါးတွေလည်း ရိုက်နဲ့ ဆရာမ အသားတွေပါ ဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်။ယက်နေရင်း စအိုပါ လျှာထိပ်နဲ့ ထိုးလိုက်တော့ ဖင်ကြီးပါ ကော့တက်သွားတယ်။“အိုး..အိုး..အား..အား.. ဟင်း..ဟင်း..ကျွတ်.. ကျွတ်.. မနှိပ့်စက်ပါနဲ့တော့… လိုးပေးပါတော့… အား..အင်း.. အမလေး.. အမေလေး….ဟင်း”“သေချာဖြဲထား..” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့.” “ဗျိ..ဗျိ..ဇွတ်.ဇွိ..ဒုတ်.”“အမေလေး..အမေရဲ့…သေပါပြီ… ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ.. မင်းမင်းရယ်.. ကွဲသွားပြီလား ..မသိဘူး..”“ဗြစ်.ဗြစ်..ဘွတ်..ဘွတ်..ဇွိ..ဇွိ”“အား..အား..အင်း..အင်း..ဟင်း.. အိုး..အိ..အား.. ကျွတ်..ကျွတ်.. အမလေး..အား..အား..ဟင်း”ခါးကော့ပြီး နောက်သို့ကော့ထွက်နေသော တင်ပါးထိပ်ကို စုံကိုင်ကာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေပါသည်။ဆောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်းလွန်းတော့ ဖင်ကြီးတွေနဲ့ ကျတော့ဆီးခုံရိုက်ချက်တွေက တဖတ်ဖတ်နဲ့ ဆူညံနေပါသည်။ဆရာမက ပါးစပ်ကလဲ…၊ “အား..အား..အင်း..အို..အိုး.. ဟင်း…ဟင်… ကျွတ်…ကျွတ်.. မင်းမင်းရယ်..အား..အား… အား….. အမလေး..အမလေး.. ဟင်း..ဟင်း.. ဆောင့်..ဆောင့်.. ကောင်းတယ်..ဆောင့်..ဆောင့် နာနာဆောင့်လိုး..
အူး..အား..အား ဘွတ်.. အားပါးပါး.. မင်းမင်းရယ်.. ဘွတ်..ထိတယ်.. အား.. အား.ထိတယ်.. အား..အား..ပြီးပြီ.. ပြီးပြီ….. ထွက်… ထွက်ကုန်ပြီ…အ…အ”ဆရာမလည်း ထွက်ကုန်သလို ကျတော်လည်း ဆရာစောက်ခေါင်းထဲ လီးရည်တွေ ထွက်ကုန်ပါသည်။လီးရည်နဲ့စောက်ရည်တွေ ပေါင်းပြီး ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်တောင် လျှံကျ ကုန်ပါသည်။“ကောင်းလိုက်တာ..မင်းမင်းရယ်… ခုလိုဖြစ်တာကို.. ဘယ်သူ့မှ မပြောပါနဲ့နော်… နောက်လည်း လိုးပေးပါနော်..” ရေချိုးပြီးတော့ နှစ်ယောက်စလုံး အနားယူကြပါသည်။ကျတော်စားဖို့အတွက် ဆရာမက ကြက်ဥကြော်ပေးပါသည် ငှက်ပျောသီးနဲ့ နွားနို့ပါတိုက်ပါသည်။ကျတော်အားရှိအောင်တဲ့။ပြီးတော့ အခန်းထဲဝင်သွားကြတယ်။အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ဆရာမက လီးကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။ကျတော်လည်း ဆရာမ နှုမ်းခမ်းကိုစုပ်နမ်းလိုက်တယ်။အိပ်ယာမှာ အသာလှဲ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲပီး ပြဲအာသွားတဲ့ စောက်ပတ်ထိပ်က စောက်စေ့လေးကို လက်ညိုးလေးနဲ့.အသာတို့လိုက်တယ်။“အင့်..အင့်..” ညည်းသံနဲ့အတူ ဆရာမတင်ပါးကြီးများ ကော့တက်လာပါတယ်။ကော့တက်လာတဲ့ တင်အစုံကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ကိုင်ပြီး စောက်စေ့လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့ယက် ကလေးလုပ်လိုက်တော့..၊“အိုး..မင်း..မင်း..” ဆရာမညည်းသံက ကျတော့လုပ်ရက်ကို အားပေးနေသလို ဖြစ်နေတော့ တို့တာရပ်ပြီး လျှာအပြားလိုက် စောက်စေ့ကို ယက်လိုက်ပါတော့တယ်။“အိုး..အင်း..အင်း..ကောင်းလိုက်တာ.. မင်းမင်းရယ်… အား..အား..လုပ်..လုပ်.. အင်း.. အင်း… ကျွတ်..ကျွတ်..”ကျတော့လျှာက ကလိသလောက် ဆရာမလည်း တင်ပါးကို ကော့ကာကော့ကာနဲ့ တအင်းအင်း တအားအား ဖီလင်တွေတက်နေပါသည်။ပါးစပ်ကလည်း…၊ “အား..အား..မင်းမင်း..အား..အား..တော်ပါတော့.. မခံနိုင်တော့ဘူး… အား..အား..ကျွတ်..ကျွတ်..” ဆရာမညည်းလေ..ကျတော်ကပိုလုပ်ပေးလေ။
“အား..အား..တော်ပြီ..တော်ပြီ..လုပ်ပါတော့.. မင်းမင်းရယ်.. လုပ်ပါတော့…”ဆရာမ အရမ်းခံချင်နေပြီဆိုတာသိတော့ ပေါင်ကြားဝင်ထိုင်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကျတော့ပေါင်ပေါ် ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ဆရာမ စောက်ဖုတ်ဝမှာတေ့ကာ လိုးထည့်လိုက်ပါသည်။“အို…အို…” လီးက ဆရာမစောက်ခေါင်းထဲ မဝင်ပဲ ချော်ထွက်ကာ စောက်စေ့ကို ထိုးမိတော့ အသဲတယားယားနဲ့ ဆရာမ အသံတွေ ထွက်လာပါသည်။ပေါင်ပေါ်က ခြေနှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်သို့ ပြောင်းတင်ပြီး လီးကို ဆရာမစောက်ခေါင်းဝမှာ သေချာတေ့ ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်တော့…၊ ”ပြွတ်” ဆို လီးတချောင်းလုံးဝင်သွားပါသည်။“အား..အား..အင်း..အင်း.. အိုး..အား..အား.. အင်း….ဟင်း.. ကျွတ်..ကျွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်.. အိုး..အင်း.. ဟင်း..အား…..”လီးကို တဆုံးထည့်လိုက် ပြန်ချွတ်ပြီး တဆုံးပြန်လိုးလိုက်နဲ့ ဆရာမကလည်း..။“အား..အား..အို..အိုး အင်း..အင်း..ဟင်း…ဟိ.. အ..အ.. ကောင်းလိုက်တာ..အိုး. အ..အ..ဟင်း.. ကျွတ်….အမေ့. ကောင်းတယ်…ကောင်းတယ်. ကောင်းလိုက်တာ….လိုးပါ… အားရပါးရ.. ဆောင့်.. ဆောင့်လိးုပါ.. အား..အား..အားရလိုက်တာ…. အို…. နာနာဆောင့်လိုး… စောက်ပက်ကွဲသွားပါစေ မင်းမင်းရယ်….တအားလိုးပေး.. အား.. အား.. ကောင်းတယ်… အို..ဟို..ဟို..အင်း..အား” ဆရာမကလည်း အော်၊ အောက်ငုံ့ကြည့်တော့လည်း စောက်ဖုတ်ထဲလီးက ဝင်လိုက်၊ ထွက်လိုက်နဲ့ ကြည့်ရတာ အရသာကို ရှိနေတာပဲ။ဆရာမက အော်လေ ဆောင့်ဆောင့်လိုးလေနဲ့ ဆောင့်ချက်အရမ်းကြမ်း လာတော့…။“အိုး..အိုး..ကောင်းလိုက်တာ…အီး..အီး.. ကောင်းတယ်.. ဟင်း..ဟင်း..ကျွတ်..ကျွတ်.. အမလေး.. အား..အား..ဆောင့်ပါ.. နားနာလိုး…ဟင်း..အင်း..အား…အား…. အား..အား… မရတော့ဘူး..ဟူး..ဟူး… အား.. ကောင်းတယ်.. ကောင်းတယ်… အား.. အား…ပြီးတော့မယ်… ပြီးတော့..မယ်… အား….ထွက်ပြီ..ထွက်ကုန်ပြီး… အား..အား”ဆရာမ အော်ညည်းရင် ကျတော့လီးကို ဆရာမစောက်ပက်က စုပ်စုပ်ယူနေတော့ မခံနိုင်တော့ဘူး။အချက် ၃၀ ကျော်လောက် မရပ်မနား ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်ရာ မအောင်နိုင်တော့ဘဲ ဆရာမရော ကျတော်ပါ သုတ်ရည်များ ပြိုင်တူပန်းထုတ်ကာ ပြီးဆုံးသွားပါတော့သည်။ဆရာမကို လိုးပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ကျတော့ကို ဆူဖို့နေနေသာသာ အလိုလိုက်၊ အကြိုက်ဆောင်၍ ပြောသမျှကို နာခံတက်သူကျတော်လိုးသမျှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကာ သူမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသည့် ဆံပင်တွေကိုပဲ အကြမ်းပတမ်း ဆောင်ဆွဲပြီးလိုးလိုး ဘာမျှ မပြောပဲ ကျေနပ်စွာ ခံယူတက်သူဟာ မင်းမင်းရဲ့ ကျူတာဆရာမပါ။ပြီးပါပြီ။